Kutladda Badbaado ee Xisbiyada Xamar & Xamar-daye oo ku khafiiftay Madaxweyne Farmaajo! | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Qormooyinka/Kutladda Badbaado ee Xisbiyada Xamar & Xamar-daye oo ku khafiiftay Madaxweyne Farmaajo!
Siyaasiyiinta Somaalida waxaa ku adag aqoonsiga iyo qirashada in laga adkaaday ama ay ku guul-daraysteen xilka loo dhiibay.
Kutlada Xildhibaanada la baxay Badbaado Qaran ayaa weli laga la’yahay geesinimo ay ku qirtaan fashilkooda Mooshinkii ay ka keeneyn Madaxwayne Farmaajo iyaga oo weli raadinaya Marmarsiimo iyo Alif wax maleh, waxna waa leeyahay.
1. Waxa ay qoraaladoodii isdaba jooga ahaa ku xuseen erayo is burinaaya sida; Mooshinkii waa buray Sharci ahaan, haddana waa ka tanaasulnay? Dadka ayaan badbaadinaynaa oo ka ridaynaa MW Farmaajo, haddana waa u turaynaa oo waa u dhaafaynaa? Madaxweynuhu waxa uu ku mashquulsanyaha arrimaha dibadda iyo gobolada ee muxuu uga jawaabi waayey uguna mashquuli waayey Mooshinka?
Nin reer Mudug ahaa ayaa dhakhtarkii waydiiyey halka laga hayo? Wuxuu ugu jawaabay “waa la igu dhanyahay” mid reer Xamar ahaa ayaa yiri “armey aniga iyo sheekha na sheegi rabtaa” hadda Xildhibaanadu “armey aniga iyo Shacabka Mooshin naga keeni rabaan? Noona turi waayaan”?
2. Maahmaah carbeed ayaa ah: “ma gardarra ilmaha u ekaada aabihiis”, 2014 waxaa nasoo maray kutlad wadatay magacaan Badbaado Qaran iyo shaqadaan oo kale oo ay hogaaminayeen Xildhibaan Dhegdheer iyo Jurille iyaga oo ka horyimid Mooshin xilligaas laga soo abaabulay Madaxtooyada oo la rabay in xilka looga qaado RW Cabdiweli Sh. Axmed, iyaga oo ku tilmaamay sharci darro, dhoob-dhoob ah, kuna qaaday weerar iska caabin ah, diidayna in la hor-keeno Barlamaanka, laba asbuuc kadib ayaa laga wacay Madaxtooyada, iyaga oo habeen kusoo baryey, subaxdii ayey noo keeneyn in Shacabka iyo Barlamaanka loo turo, Mooshinkana la aqbalo, Sharci darradana laga Tanaazulo’ sancana la geliyo, “Xalay iyo Caawa maxaa isaga ek”.
3. Haddii aad akhriso eedeymaha 4ta ah ee lagu eedeeyey Madaxweynaha iyo Dastuurka waxaa kuu cadaanaya in arrintu tahay; oohintu orgayga ka wayn iyo aabe wiilka yar iga dhici kan waynna ii daa? Sida qodobada tilmaamaya hawsha Madaxweynaha oo caddeynaya: In hawlaha Golayaasha fulinta, Sharci-dejinta iyo Garsoorku ay ku dhamaadan Madaxweynaha ee aysan hawshu isaga ka bilaaban, sidoo kale la xisaabtanka iyo eedayntuna isaga kama bilaabato!
Eedaymaha 4 ta ah ee ay sheegeen waxaa eedahooda iyo la xisaabtankooda iska leh: Wasiirka arrimaha dibadda hashiisyada dibadda, Wasiirka arrimaha gudaha Gobalada, Wasiirka amniga iyo taliyaasha Ciidamada, Xeer ilaalinta iyo Garsoorka dadkii la xiray ama la dhiibay, haddii ay soo dhaafto Wasiirada waxaa iska leh Ra’isalwasaaraha lkn in laga bilaabo Madaxweynaha waa aqoondarro Sharci ama Dastuur ama waa ujeedooyin siyaasadeed!
Madaxwene Farmaajo waa Madaxeynihii ugu horeeyay Aadam Cabdulle kadib ogolaada in uu hawsha u daayo Xukuumadda iyo Ra’salwasaaraha kuna ekaado inta uu dastuurku u xadiday, waxa ayna aheed in lagu abaal mariyo lkn Xildhibaanadu iyaga ayaa raba in ay kali-taliye ka dhigaan, dadkana u sheegaan in uu wax kasta isagu ka Mas’uul yahay, mana jirto meel ay ku qorantahay in wadanka hal qof uu Mas’uul ka yahay, ee waxaa qoran in wadanka ay Mas’uul kayihiin hay’ado kala sareeya.
Haddii aad dhahdo: Qofkii la xiray mid laga joojiyay shir Hotel, Jid la xiray ama Qof la dilay ama la dhiibay, Madaxweyne Gobaleed ku fashilmay Xilkiisa iyo mid lagu bedelay, Xildhibaan Mooshin raba iyo mid diidan iwm, dhammaan Farmaajo ayaa ka danbeeya kana Mas’uul ah; waxaad rabtaa kana qeyb-qaadanaysaa in uu noqdo kali-taliye ka mas’uul ah wax kasta oo yar ama wayn, haddii aan la siin qof kasta Mas’uuliyadiisa iyo la xisaabtankiisa!
Waxaan rajeynayaa in wax laga barto waaya aragnimadii nasoo martay kana korno maritaanka wadadii hore iyo filashada natiija cusub???